Xarunta Hyperbaric for Sale - Monoplace Multiplace Hyperbaric Rugaha Oxygen Therapy Manufacturer HBOT
Ku saabsan Tekna
Chamber of News
Qeybaha Hordhaca ah
Hypobaric - Heerka sare
Mashiinka Dhoobada Dabka
Waa maxay Xarunta Hyperbaric?
KALA DUWAN MOBILEED
Qalabka Cadaadiska Gaaska ee Caafimaadka
Oxygen Generator Qaybta Caafimaadka
La xidhiidh Maraykanka Sales
Dayactirka Sanadlaha ah
Tababarka Gardoonka ah
Takhasusayaha Fiktooriya ee Takhasuska leh
TEKNA Solutions Practices
Kiliinikada Gawaarida ee la Wareegayo
Warshad OEM ah
Qaybaha Tayo ee ugu Fiican iyo Dhamaystiran
Xarunta Hyperbaric for Sale - Monoplace Multiplace Hyperbaric Rugaha Oxygen Therapy Manufacturer HBOTteknamfg2018-08-01T07:38:41+00:00
Chambers Hyperbaric for sale - Tekna waa hogaamiyaha ugu horreeya ee Monoplace iyo Multipace Hyperbaric for Hyperbaric Oxygen Therapy HBOT
Nidaamka A, B, C
ASME / Guddiga Qaranka
Fasalka A, B, C
Fasalka A, B
Ma ubaahantahay caawimo xulashada qolkaaga quruxda badan?
Monoplace Chamber Hyperbaric
Xarumaha Isgaadhsiinta Monoplace ee iibka
Isku xirka 4000 Monoplace
Isku xirka 3200 Monoplace
Monoplace Chambers waxaa loogu talagalay in lagu daaweeyo hal bukaan waqti go'an.
Monoplace Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) Chambers waa la riixay ilaa 3.0 Atmospheres oo leh 100% Oksijeer Caafimaad ee Oxygen. Bukaanku sidoo kale wuxuu neefsan karaa Qalabka Caafimaadka ee Darajada inta lagu jiro Air Break ama Nidaamka Maaskarada.
Chambers Tekna Monoplace waa qeeybaha ugu nabadgelyada badan iyo kuwa ugu raaxada leh ee suuqa yaala. Tekna Chambers waxay bixisaa sahlanaanta hawlgalka iyo qancinta bukaanka. Haddii aad isticmaasho Daaweynta Hyperbaric waa inaad si dhow u fiirsataa faa'iidooyinka ku yaalla qolalka caanka ah ee Tekna.
Tekna waxay leedahay noocyo badan oo ka mid ah Monoplace Hyperbaric
Qeybaha Oxygen Therapy for Sale. Halkan riix si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Chambers Tekna Monoplace
Xaruunta Muusikada ee Multipre Hyperbaric
Qaababka Isgaadhsiinta Isku-dhejinta ee Ganacsiga.
Model 6000 SL Multiplace
Model 6000 DL Multiplace
Model 7200 SL Multiplace
Model 7200 DL Multiplace
Model 8400 DL Multiplace
Isku-dhafan la isku qaadsiin karo
Qeybaha Multipace waxaa loogu talagalay in lagu daaweeyo bukaanno badan.
Qeybaha Oxygen Therapy (HBOT) Multipre Hyperbaric Hyperbaric Thermotherapy (HBOT) waa la riixay ilaa 6.0 Atmospheres leh Fasalka Caafimaadka Daawada. Bukaannada ayaa neefsanaya 100% Oksijiin Daaweynta Qalabka Caafimaadka iyada oo loo marayo Nidaamka Hood ama Nidaamka Maskaxda.
Qaybaha Tekna Multipace waa qeeybaha ugu amaansan uguna raaxeysan ee suuqa yaala. Tekna Chambers waxay bixisaa sahlanaanta hawlgalka iyo qancinta bukaanka.
Tekna waxay leedahay noocyo badan oo kala duwan oo ah Multiple Hyperbaric Chambers Hyperbaric Chambers for Sale.Click halkan si aad wax badan uga barato Chambers Tekna Multiplace
Waxaad ubaahan tahay Tani
Tilmaamo bilaash ah
Hadda Hesho! Lambar xaddidan oo la heli karo
Hadda waxaa lagu turjumey luqadaha kala duwan ee 105
Bukaanka iyo Daawooyinka.
Xarunta Hyperbaric ee Sale!
Miyaad raadineysaa wax ka badan kaliya Hudheelka Oxygen Rugta Daaweynta ee Hyperbaric?
Tekna wax badan ayuu ka badan yahay oo kaliya iibinta qolalka. Tekna waxay ka weyntahay sannadka 100 ee isku darka cilmi-baarista Hyperbaric iyo Aqoonta ee ku yaal Daawooyinka Hyperbaric, Daaweynta Hyperbaric, iyo Hawl-qabadka Hiv-ga ah ee Hig-hufan. Haddii aad tahay bukaan socod eegto yar ama isbitaal weyn waxaan la kulmi karnaa baahidaada Daaweynta Hyperbaric Therapy.
Tekna waxay bixisaa qorsho horay loo iibsado oo ay ku jiraan Dib-u-eegista Rugta Su'aalaha Dib-u-Eleedka, Meelaha Qalabka Hyperbaric, Qalabka Oxygen Layouts, Goobta Xiriirka Xirfadaha, Dib-u-eegista Qodobka Dhismaha, iyo Dab-damiska Marshal.
Tekna waxay bixisaa Xirfadle Mihnad ah, Dejin iyo Tijaabo, iyo Tababar Tababarka Fulinta oo loogu talagalay tusaalahaaga gaarka ah ee Tekna Chamber.
Tekna waxay sidoo kale bixisaa Dayactir Sannadeed, Adeeg, iyo Imtixaan si loo hubiyo in Your Tekna HBOT Chamber marwalba shaqeynayo waxqabad wanaagsan.
Dhismayaasha, Qandaraaslayaasha, Wakiilada, iyo Distributors Soo dhawow!
Miyaad qorsheyneysaa macaamiishaada Hibiska Hyperbaric ama Isbitaalka?
Miyaad u baahan tahay qiyaasaha farsamada iyo qorshooyinka dhulka loogu talagalay Nidaamka Fadhiga oo leh dhammaan qalabka taageerada?
Miyaad dooneysaa inaad ogaato jawaabta saxda ah ee su'aalaha dabka ee Fire Marshal u socoto?
Ha ku caawiyo Tekna! Waxaanu la shaqeynnaa Architects, Contractors, iyo Agent maalin kasta si loogu daro qolka qorshahaaga si sahlan oo aan xanuun lahayn.
Daawada Hyperbaric Daaweynta Oxygen ee Hyperbaric HBOT
Daawada Hyperbaric, oo loo yaqaan 'Hyperbaric Therapy Therapy' ama HBOT, waa daweyn caafimaad oo bixisa 100% oxygen habka sambabada ee bukaanka halka ay ku jiraan rugta Oxygen Therapy. Bukaanku wuxuu ku neefsanayaa oksijiin heerarka ka weyn kan 21% kaas oo laga helo jawiga caadiga ah ee badda.
Kororka tayada cadaadiska qayb ahaan ee oksijiinta ee heerkulka ayaa xoojin kara habka bogsashada waxayna caawineysaa dib u soo kabashada calaamado badan.
Dhibaatooyinka dhinaca HBOT waa mid aad u yar oo dhif ah. Daawada Hyperbaric maaha daawo loogu talagalay calaamadaha ugu badan, laakiin waxay muujisay in ay kordhiso awoodda difaaca, caawinta bukaanada qaba dhibaatooyinka kala duwan ee ka yimaada boogaha daba dheeraadka ah ee naafanimada adag.
Mayo Clinic • HBO Therapy • Oxygen 100 • Su'aalaha • Halista
The Hybrid 4000 waa kan ugu qurxoon ee Monoplace Chamber ee aan waligay arkeen.
Tekna 4000 waa mid aad u fudud in la isticmaalo. Barashada sida loo isticmaalo waxay ku qaadatay dadaal la'aan. Mid aad u fiican!
Gudaha Tekna, bukaannadayadu waxay si joogta ah uga faalloodaan sida ay u raaxaystaan ​​dalalkooda.
Our Hyperbaric Chamber waa cajiib ah! Ka fiican sidii aan rajeynay!
Qolkeena waxaa la dhisay oo lagu rakibay 2002. Waa shaqo-shaqo. Marnaba wax dhibaato ah nagama qabin.
Jay - Mulkiilaha - Agaasimaha Hawlgallada
Dhammaan bukaankayaga way jecel yihiin qolka Tekna. Waa raaxo iyo qolal.
Tan iyo markii ugu horeysay ee saddex qol oo Monoplace Chambers in 2000 waxaan ka iibsaday $ 1 Million dollar oo ka mid ah HBOT Nidaamka Tekna.
Waxaanu aad ugu faraxsannahay tayada, shaqada, iyo kalsoonida labadayada Model 6000 Multiplace Chambers.
Bukaannada ayaa u maleynaya in Xarunta Tekna ay u muuqato qabow waxayna jecel yihiin qolka.
Xarunta Tekna waa hawlwadeen isboorti oo leh dhammaan bambooyinka badbaadada iyo foorida.
Nidaamka lixaad ee isugeynta ee aad naga dhiso 2009 waxay sii wadaysaa inay noqoto mid la isku hallayn karo oo kharashkuna waxtar u leeyahay hawlgalka.
Roy Schmidt - TN Xarumaha Hyperbaric
Ma aha inaad aqbashid qolka cakiran. Wax walba oo ku saabsan Tekna 7200 ayaa leh qalab caafimaad oo dhamaaday.
Qolkeena waa mid aan la furfuri karin. Waxaa ku jira sanadka 15 ee qaliinka, mana aanan waligeen maalin uun.